လေရဟတ်တာဘိုင်သို့မဟုတ်လေရဟတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
သို့သော်လေဖြစ်လာသည် လျှပ်စစ်မီး? လက်ရှိ၏တိုက်ရိုက် antecedent လေရဟတ်တာဘိုင် အဟောင်းတွေဖြစ်ကြသည် စက်များရေကိုထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ကြိတ်ခွဲခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်ယနေ့တိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ က လေရဟတ် ၎င်းသည်ဘုံရိုးသို့ဓါးသွားများသို့မဟုတ်ဓါးသွားများပါသည့်စက်ဖြစ်ပြီးလေတိုက်သောအခါလေသည်စတင်လှည့်ပတ်သွားသည်။
ဤလည်ပတ်ရိုးသည်အမျိုးမျိုးသောစက်ယန္တရားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာ - စပါးကြိတ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း။
ရယူသည် လျှပ်စစ်မီး, အဓါးသွားများ၏လှုပ်ရှားမှုဟာပြောင်းလဲတဲ့လျှပ်စစ်မီးစက် (တစ်ခု alternator တစ်ခုသို့မဟုတ် dynamo) မောင်းနှင် စက်မှုစွမ်းအင် အတွက်လည်ပတ်၏ လျှပ်စစ်ပါဝါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဘက်ထရီများထဲတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးဇယားကွက်သို့တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်သည်။ ဤစစ်ဆင်ရေးသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ ရှုပ်ထွေးလာသည်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည် လေရဟတ်တာဘိုင် ပိုမိုထိရောက်
8 ၆၆ နှစ်လုံးလုံးအိမ်တစ်လုံးရရန်လုံလောက်သည်
လေရဟတ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အလျားလိုက်ဝင်ရိုး, ယနေ့အသုံးအများဆုံးနေသော, ဒါမှမဟုတ်လည်းရှိပါတယ် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး.
ဝီကီပီးဒီးယားမှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဒေါင်လိုက်လေတိုက်တာဘိုင် သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မီးစက်တူသောအလျားလိုက် လေတိုက်၏ kinetic စွမ်းအင်ပြောင်းလဲ စက်မှုစွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အတွက်လေတိုက်တာဘိုင်မှတဆင့်။
ဒေါင်လိုက် ၀ င်ရိုးရှိသူများသည်တိမ်းညွတ်မှုယန္တရားကိုမလိုအပ်သောကြောင့်ထင်ရှားသည်။ လျှပ်စစ်မီးစက်ဆိုသည်မှာမြေပေါ်တွင်စီစဉ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးရှိသူများ၊ ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုပါ သေးငယ်သောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုမှသည်ကြီးမားသောလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများအထိတပ်ဆင်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးလေတာဘိုင် တစ် ဦး တိမ်းညွတ်ယန္တရားမလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်လျှပ်စစ်မီးစက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘယျသို့မြေပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
Su စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနိမ့်သည် ၎င်းမှာသေးငယ်တဲ့မသန်မစွမ်းမှုအချို့ရှိပြီး၎င်းကိုသွားဖို့မော်တော်ကားတပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အသုံးအများဆုံးပြproblemsနာတစ်ခု လေရဟတ်တာဘိုင် ၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသောတုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံအပြင်ကြီးမားသည့်အရွယ်အစားလည်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အိမ်များနှင့်ဝေးသည့်နေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြသည် သေးငယ်တာဘိုင်ကိုတည်ဆောက် (သင်လေအားလျှပ်စစ်အသေးစားနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်), o တိတ်ဆိတ် ကြောင်းမြို့ပြဒေသများ၌တည်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မျိုးဆက်တစ်ခု၏မျိုးဆက်သစ်များအတွက်စိတ်ပူစရာအကောင်းဆုံးပြtheနာတစ်ခု လေစွမ်းအင် ၎င်းသည်လေ၏အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ The တာဘိုင် ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လေထဲ၌အချို့လေထဲ၌မှုတ်သောအခါအကောင်းဆုံးအနေအထားတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားကြသည် မြန်နှုန်းအကွာအဝေး။ တစ်ဖက်တွင်ဓါးသွားများကိုရွေ့ရန်အနည်းဆုံးအမြန်နှုန်းလိုအပ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းရှိသည် အများဆုံးကန့်သတ်။
ဥပမာအားဖြင့်, အများဆုံးအသုံးအများဆုံးသည်ဤကန့်သတ်နှင့်အတူရှိကြ၏ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၃ မှ ၂၄ မီတာအကြားရှိသည်။ နိမ့်ဆုံးအား connection speed ဟုခေါ်သည်။ အနည်းဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ရန်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးကို cut-off speed ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ယန္တရားကိုချိုးဖောက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးဖြစ်သောအခါဖြစ်သည်။
Un လေရဟတ် တစ်ယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လေရဟတ်များမြေပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်း ကုန်းတွင်းလေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ, ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူတို့ခေါ်သောအရာအတွက်ကမ်းရိုးတန်းမှအချို့သောအကွာအဝေးမှာရေပေါ်မှာ install လုပ်နိုင်ပါတယ် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်.
ထောင်ပေါင်းများစွာသောလေစိုက်ခင်းများနှင့်မော်ဒယ်များပြည့်နှက်နေသည် .ပြီလ (အလျားလိုက်ဝင်ရိုးလေတာဘိုင်) ။ ဤစက်များကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မျှော်စင်နှင့်အုတ်မြစ်။ မျှော်စင်အုတ်မြစ်များသည်ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်စေနက်ရှိုင်းသည်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်လေတာဘိုင်၏တည်ငြိမ်မှု၊ nacelle နှင့် motor ဓါးသွားတို့၏အာမခံချက်ရှိသည်။ အုတ်မြစ်သည်လေ၏အပြောင်းအလဲနှင့်စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတွန်းများကိုလည်းစုပ်ယူရမည်။
တာဝါတိုင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်
သံမဏိ tubularလေတာဘိုင်အများစုကို tubular သံမဏိတာဝါတိုင်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာ။
ကွန်ကရစ်တာဝါတိုင်များဖြေ - သူတို့ကတူညီတဲ့နေရာမှာတည်ဆောက်ထားပြီးလိုအပ်တဲ့အမြင့်ကိုတွက်ချက်နိုင်တယ်။
Precast ကွန်ကရစ်တာဝါတိုင်။ သူတို့ဟာအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းအစတွေနဲ့စုစည်းထားတယ်။
ရာဇမတ်ကွက်ဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိပရိုဖိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည်။
Hybridsဖြေ - သူတို့မှာမျှော်စင်အမျိုးမျိုးရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနိုင်တယ်။
Rotor: လည်ပင်းသည်လေရဟတ်တိုင်း၏ "နှလုံးသား" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တာဘိုင်ဓါးများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်လေ၏တွန်းအားကိုစွမ်းအင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်သူတို့ကိုစက်ယန္တရားနှင့်အလှည့်ကျရွေ့လျားစေသည်။
Gondola။ ။ လေရဟတ်တာဘိုင်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးသော ဦး ခေါင်းဖြစ်ပြီးတာဘိုင်စက်ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါ gondola မျှော်စင်ပူးပေါင်းမည် ဝက်ဝံအားဖြင့် လေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
multiplier box: လေအပြောင်းအလဲများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအပြင်ဂီယာအုံသည် rotor ၏အနိမ့်အလှည့်အရှိန်နှင့်မီးစက်၏အမြန်နှုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားအတိုင်းပြောသည်; မီးစက်မှထွက်သောအခါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 18 rpm တွင် rotor ၏သဘာဝလှုပ်ရှားမှုမှထုတ်လုပ်သော 50-1.750 rpm ကိုများပြားစေနိုင်သည်။
ဂျင်နရေတာစက်။ ဒါဟာစက်မှုစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ စွမ်းအင်မြင့်တာဘိုင်များအတွက်သမားရိုးကျ synchronous နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမီးစက်များများပေါများသော်လည်းနှစ်ဆပါသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမီးစက်များကိုအသုံးပြုသည်။
ဘရိတ်: စက်မှုဘရိတ်များကို power train တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင်လိုအပ်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပွတ်တိုက်အားကိုမြင့်မားသောပွတ်တိုက်အားကိန်းလိုအပ်သည်။
ယနေ့လေစွမ်းအင်သုံးတာဘိုင်များသည်အိမ်များသို့စွမ်းအင်သက်သာစေရန်ဓါးသွားများနှင့်မီးစက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ လေတာဘိုင်များတွင်လည်းရှိရမည် တစ် ဦး ချင်းစီပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ်နှင့်မြောက်မြားစွာအာရုံခံကိရိယာ။ ယင်းတို့ကအပူချိန်၊ လေ၏ ဦး တည်ရာ၊ အမြန်နှုန်းနှင့်ဂွန်ဒိုလာအတွင်း၌သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါ်လာနိုင်သောအခြား parameters များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာသည်။
ဒါခေါ် "နှေးနှေးလေရဟတ်တာဘိုင်" ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအားသာချက်ကသူတို့ရှိသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဓါးသွားများ Rapids နှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် စျေးသက်သာသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ပြproblemsနာကဘာလဲ။ သူတို့၏ကြီးမားသောအချင်း (အမြင့် ၄၀ မှ ၉၀ မီတာ) နှင့် ဦး ခေါင်း ၁၀၀ မီတာရှိသောလှည့်စက်များရှိသော်လည်းလေရဟတ်များ အစာရှောင်ခြင်းပေါ့ပါးဖြစ်ကြသည် နှေးသောသူများထက်။
၎င်းသည်လေစွမ်းအားအချိုး၏ပိုမိုအားသာချက်ယူသောစွမ်းအားမြင့်မီးစက် (0,5 မှ3MW) မှရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ပိုမိုပေါ့ပါးသောကြောင့်ဓါးသွားများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွေ့လျားနိုင်သဖြင့်အရွယ်အစား၊ မြှောက်ကိန်းကုန်ကျစရိတ် လျှပ်စစ်မီးစက်ကိုမောင်းတယ် လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်.
ဓါးသွားနည်းသောကြောင့်လေစွမ်းအားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သည်။ လေတိုက်နှုန်းမြန်သောတာဘိုင်များကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် လေပြင်းတိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖိစီးမှု။ စာရေးသူအနေဖြင့်စာရေးတံ၏လည်ပတ်မှုကြောင့် axial တွန်းကန်အားသည်လျင်မြန်သောလေတာဘိုင်များတွင်လှည့်သောအခါထက်လျော့နည်းသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ဖြစ်ပျက် နှေးကွေးလေတိုက်တာဘိုင်။
Vestas သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေရဟတ်တာဘိုင်၏နောက်ဆုံးသတင်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒီတာဘိုင်ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၌နာမဝိသေသနမရှိပါ။ အဆိုပါ V164, နှင့်အတူ 220 မီတာလေရဟတ် ၃၈ တန်၊ မီတာ ၈၀ ရှည်သောဓါးသွားများ, ဒိန်းမတ်အတွက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုစိတ်ဝင်စားသူများ၏အပေါငျးတို့သအာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
ယခင်တာဘိုင်သည်မဂ္ဂါဝပ် ၈ မဂ္ဂါဝပ်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးသတင်းများကြောင့်ယခုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်9မဂ္ဂါဝပ် တိကျသောအခြေအနေများအောက်တွင် output ကို။ ၎င်း၏ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာ V164 ဖြစ်ခဲ့သည် ၂၄ နာရီအတွင်း ၂၁၆,၀၀၀ kWh ထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
၎င်းသည်လေရဟတ်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကြွင်းမဲ့စံချိန်တင်ရုံသာမကသမုဒ္ဒရာလေများရှိလိမ့်မည်ဟုအထင်ရှားဆုံးသောပြသမှုပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးသားဖြစ်ဆဲစွမ်းအင်ကိုအကူးအပြောင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္။ ။
Torben အဆိုအရ Hvid larsen, Vestas CTO:
"ငါတို့ ရှေ့ပြေးပုံစံကနောက်ထပ်မျိုးဆက်စံချိန်တင်ထားပြီ ၂၄၆ နာရီအတွင်း ၂၁၆၀၀၀ kWh ထုတ်လုပ်သည်။ ဒီ ၉ မဂ္ဂါဝပ်ရှိတဲ့လေစွမ်းအင်သုံးတာဘိုင်ဟာစျေးကွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီး၎င်းသည်ကမ်းလွန်လေစွမ်းအင်စျေးနှုန်းများကိုလျှော့ချရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
များသောအားဖြင့် kilowatts အကြောင်းပြောခြင်းသည်အနည်းငယ်ခက်ခဲပြီးစိတ္တဇဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တရားဝင်အလောင်းတွေအရသိရသည် စပိန်အိမ်တစ်အိမ်၏ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမှာတစ်နှစ်လျှင် ၃၂၅၀ kWh ဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိက၏အဓိကမြို့ကြီးများရှိမြို့ပြနေအိမ်များ၏နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှစားသုံးမှုထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာထုတ်လုပ်သည့်နေ့၌၎င်းသည်ပျမ်းမျှအိမ်တစ်အိမ်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သည် ၆၆ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်.
မက်ဒရစ်ရှိ Torres Kio ထက်ပိုကြီးပြီးမက္ကဆီကိုရှိ Torre Mayor နှင့်ဆင်တူသည်၊ သူတို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည် London Eye ၏ London ဘီးဘီးထက်ပိုကြီးသည်။ ဒီတာဘိုင်ပါ ဒါဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပဲ V164-8.0 MW ၏လေတာဘိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်ပြီးပါပြီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်အိမ်ထောင်စု ၁၆၀၀၀ ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » လေရဟတ်တာဘိုင်သို့မဟုတ်လေရဟတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ငါ Edilberto ကနေ 50 ကီလိုမီတာဂရုစိုက်